Ukulungiswa kweCannabis Glycerin Khipha nge-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhishwa kwe-cannabis ku-glycerin kuyindlela ekhululekile yokukhipha ama-cannabinoids ngokuqondile emthini owomile wesitshalo.
I-cannabis glycerin igxila kungenziwa kalula nganoma yiluphi uhlobo lomkhiqizo ongenalutho lwe-cannabis njengama-tinctures, ama-vapes, isithako sokubhaka, ama-lotions njll.
Isizinda se-ultrasonic yindlela ephakeme yokulungisa i-cannabis. Nge-sonication, ukuvunwa kwesithamo kunyuke kakhulu, kanti isikhathi sokukhipha sinciphile emaminithini ambalwa.
Indlela Yokulungisa I-Cannabis Glycerin Concentrate
Ukuze inqubo evamile yokubandayo ilungiselelwe i-glycerin tincture, i-cannabis efihlekile ngokuvamile ibanjwe cishe. Izinsuku ezingu-90-120 ku-glycerin ukukhipha izinto ezisebenzayo. Inqubo yokubandayo idla isikhathi esiningi, kodwa inenzuzo ngaphezu kwesizinda esishisayo esishisayo ukuthi izinsimbi ezisebenzayo ezifana ne-THC, i-CBD, i-terpenes njll azihlaziyi ngokushisa. Isizinda se-Ultrasonic yinkqubo engeyona ye-thermal, engenziwa ekamelweni lokushisa. Kungakapheli imizuzu embalwa, ukuhlanganiswa okuphelele kwamakhemikhali asebenzayo angakwazi ukufezwa ngaphandle kokuchithwa okushisayo. Umshini wokucubungula okukhiqizwayo kubanda futhi ku-tastier tincture, ngoba i-terpenes enamakha igcinwa.
Iresiphi eyisisekelo ye-ultrasonic isizinda se-cannabis ku-glycerin yemifino ihlanganisa izinyathelo ezilandelayo:
400mL (cishe ama-ounces ayisishiyagalombili) we-glycerin yemifino yokudla
Amagremu ama-35 we-cannabis omisiwe (efihlekile, izimbali, amaqabunga noma iziqu)
Inani le-cannabis: i-glycerin ingashintshwa ngekhwalithi ye-cannabis namandla anamandla womkhiqizo wokugcina. Inani le-glycerin yemifino kanye ne-cannabis ingafakwa phezulu noma phansi ngokulandelana komthamo wokukhiqiza oyifunayo we-glycerite.
Sicela uqaphele ukuthi okukhipha okuvela efihlekile nezimbali kuyi-tastier. Noma kunjalo, i-cannabinoids ephumelelayo ingasuswa kusuka emigqumeni, futhi.
UP400St – Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Cannabis ku-Setha ye-Blit Yesebenzi engu-8L
I-Decarboxylation (okukhethwa kukho): Kokubili, i-decarboxylated kanye ne-decarboxylated cannabis ingasuswa ngezinyathelo ezilandelayo. Ukuze uthole amandla aphezulu we-THC, i-decarboxylation inconywa ngokucacile. Ukuze uthole i-tincture ye-cannabis ephumelela kakhulu, kunconywa ukuba i-decarboxylate yezinto zokutshala ze-cannabis. Lokhu kungenziwa kalula ngokushisa i-cannabis ebhodini lokubhaka kuhhavini. Ngakho-ke, preheat ovini kuya 240 ° F / 115 ° C. Faka i-cannabis imizuzu engama-30 kuya kwangu-40, uvuselele imizuzu yonke engu-10 ukuze idonsa ngendlela efanayo. Vumela i-cannabis iqede phansi ngaphambi kokuqhutshwa okuqhubekayo.
2.1. Ukulungiselela: Ama-gramu angu-35 kagesi owomile, ochotshoziwe we-cannabis wengezwa ku-beaker yengilazi ene-400mL yemifino glycerin. I-beaker ene-glycerin-cannabis ingxube ifakwa kwisitsha esikhulu esine-ice-bath. Uma kudingekile, esikhundleni seqhwa uma ucibilika phakathi ne-sonication ukuqinisekisa ukushisa okusheshayo kokushisa ukuze kugcinwe izinga lokushisa elingaphezulu kuka-30 ° C.
2.2. I-Sonication: Isizinda se-Ultrasonic senziwa ngeprosesa ye-ultrasonic UP400St nge probe S24d40. I-probe (eyaziwa nangokuthi tip, uphondo noma i-sonotrode) yeprosesa ye-ultrasonic UP400St (400W, 24kHz) igxila cishe. 4cm ku-glycerin yemifino. Hlela ukuphakama nge-digital touch display ku-50%. Sonicate ingxube for 3-4 imizuzu ngenkathi ukuhambisa probe ultrasonic kancane ngokusebenzisa glycerin.
Ukuhlunga iglycerite: Ukuze ususe izingxenye zezitshalo ezisuka ku-cannabis glycerin, gincerin. Njengoba i-glycerin inamahloni futhi inamathele, ukusetshenziswa komshini omuhle wensimbi noma isikhwama se-strainer kuye kwafakazelwa ukuthi kuyona elula.
Isitoreji: Gcina esitsheni seglasi endaweni epholile futhi epholile. Uma igcinwe kahle, i-cannabis glycerin izithako zinezinto zokubeka amashefu eziningana. Unyaka ongu-1.
I-UP400St ye-Ultrasonic Cannabis Extraction (i-2L batch)
Njengezinye iziphuzo zokwelapha ezichazwe ngenhla ezichazwe nge-ultrasonic isikhumba / inqubo yokungenisa ukumnika, amafutha kakhukhunathi, amafutha omnqumo, amafutha e-canola, noma ibhotela ingasetshenziswa. Ama-coconut namafutha omnqumo ayethandwa uma ukugxila kwe-cannabis kufanele kusetshenzwe ngokuqhubekayo emulsion edayidis.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic emulsification yamafutha we-cannabis!
Izinzuzo ze-Ultrasonic Cold Extraction
isisindo esikhulu sejubane
isivuno esikhulu, potency ephezulu (ephumelelayo)
izinga eliphezulu (elimnandi & okuhlwabusayo)
emulsification ozinzile wezinhlobo ezahlukene zemikhiqizo
Indlela Yokulungisa I-Ejusi E-Cannabis
I-cannabis ingadliwa njenge-e-juice (noma i-e-liquid, i-vape juice) noma ama-vapes abhema ngo-e-cigarette. Ukuze kusetshenziswe i-juice ekhishwe yi-cannabis, izinga lokudla-propylene glycol (PG) linikeza imiphumela emihle kakhulu. Ngaphandle kwalokho, i-glycerin yemifino noma ingxube ye-glycerin yemifino ne-propylene glycol (isib. 7: 3) ingasetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-cannabis e-oketshezi ukugcwalisa i-cartridges ye-e-cigarette.
500mL yepropylene glycol (PG)
Ngaphandle kwalokho, ingxube ye-glycerine yemifino kanye ne-propylene glycol nge-7: 3 ingasetshenziswa. (Izingxenye ezingu-7 zemifino glycerine kuya ezingxenyeni ezingu-3 propylene glycol)
Ama-gramu angu-30 we-cannabis echotshoziwe (omisiwe, i-decarboxylated)
Ukukhishwa kwe-Ultrasound: I-beaker ne-propylene glycol – ingxube ye-cannabis ifakwe kwisitsha esikhulu esine-ice-bath. Uma kudingekile, esikhundleni seqhwa uma ucibilika phakathi ne-sonication ukuqinisekisa ukushisa okusheshayo kokushisa ukuze kugcinwe izinga lokushisa elingaphezulu kuka-30 ° C.
I-Sonication: Isizinda se-Ultrasonic senziwa ngeprosesa ye-ultrasonic UP400St nge probe S24d40. I-probe (eyaziwa nangokuthi tip, uphondo noma i-sonotrode) yeprosesa ye-ultrasonic UP400St (400W, 24kHz) igxila cishe. 4cm ku-glycerin yemifino. Hlela ukuphakama nge-digital touch display ku-50%. Sonicate ingxube for 3-4 imizuzu ngenkathi ukuhambisa probe ultrasonic kancane ngokusebenzisa glycerin.
Ukuhlunga i-juvenile ye-cannabis: Ukususa izitshalo zezitshalo ezisuka ku-cannabis glycerin ukugxila, gxila i-glycerin noma i-filter filter noma i-mesh emihle.
Isitoreji: Gcina esitsheni seglasi endaweni epholile futhi epholile. Lapho igcinwe kahle, i-juvenile ye-cannabis ine-shelf life of approx. Izinyanga ezingu-12-24.
I-Hielscher sika-UIP4000hdT – 4kW high performance ultrasonics for isizinda of cannabis in flow-ngokusebenzisa mode
Hielscher Ultrasonics’ Izinsiza
I-Hielscher Ultrasonics ngumphakeli wakho wezinhlelo ezinamandla, ezinokwethenjelwa ze-ultrasonic. Izinqubo zethu ze-ultrasonic zivela ebhentshini-phezulu kanye nomshayeli wezokushayela ukuze kusetshenzwe ngokugcwele izimboni. Izinqubo zethu ezinamandla ze-ultrasonic zingasetshenziselwa ukuqhutshwa kwe-batch ne-inline processing. Ukulawula okulula futhi okuqondile kuzo zonke izigaba zomsebenzi ukuqinisekisa izinga eliphakeme lokukhipha eliphezulu nenqubo ephezulu yokusebenza.
Ama-high-power ultrasonic izinhlelo kusukela ebhayisini kuya ku-pilot kanye nezilinganiso zezimboni.
I-glycerite yilapho kukhishwa imifino noma ezinye izinto zokwelapha ezisebenzisa i-glycerin njengesiyingi esikhulu samanzi.
I-Glycerin (ebizwa ngokuthi i-glycerine noma i-glycerol) ishukela utshwala. Kuyinto yamanzi engenambala, engenamakha, enamahloni ayenambitheka-amnandi futhi engeyona enobuhlungu. Umhlane we-glycerol utholakala kuwo wonke ama-lipids okuthiwa i-triglycerides. Isetshenziswa kakhulu ekudleni kanye nasemikhiqizweni yemithi. I-Glycerol inezinhlobo ezintathu zama-hydroxyl eziphethwe ukuhlunga amanzi emanzini kanye nemvelo yayo. I-Glycerin isebenza njengokubili kokusungulwa nokulondolozwa. Ama-glycerite anenzuzo njengoba uketshezi lwezokwelapha ngenxa yokwelapha okumnandi nokuntula utshwala. Inzuzo ye-glycerin ngaphezu kwe-tincture yotshwala itholakala ukuthi i-glycerin ayilonakali izakhi ze-botanical ngenkathi uphuza utshwala luvame ukuluhlaza.
I-cannabis igxile ekuhlotsheni kwe-glycerin ingahle igcinwe endaweni epholile, eyomile, kodwa ayikhombisi impilo efanayo yokuhlala isikhathi eside / ishalofu njengamatshe asekelwe utshwala. Isiqandisiso sisiza ukukhulisa ukuzinza futhi ngaleyo ndlela sinconywa.
I-cannabis glycerin izithako zisebenza ngendlela ephumelelayo ekukhiqizeni futhi zinikeza ifomu elilondekile, elingenalo utshwala kumuthi we-cannabis.
I-Delta9-tetrahydrocannabinol (i-THC) iyisisindo esiyinhloko sokusebenza kwengqondo ku-cannabis. Isitshalo esiphila, isitshalo se-cannabis esiluhlaza aluqukethe eziningi ze-THC. Kunalokho, inani eliphakeme kakhulu le-tetrahydrocannabinolic acid (THCA) lingatholakala. I-THCA ayibonisi imiphumela engasebenzi futhi ngeke idale “phezulu” umphumela. Ngakho-ke, i-THCA kumele iguqulwe ibe yi-THC engasebenzi. Ukuguqulwa kwe-THCA ku-THC kungatholakala nge-decarboxylation. Nge-decarboxylation, iqembu le-carboxyl -COOH lisuswa kuma-molecule we-THCA.
Nge-decarboxylation, i-cannabis iqala ukunambitheka okunambithekile noma okugcobe. Kodwa-ke, noma ngabe i-decarboxylation ihambisana nezinzuzo eziningi, abanye abasebenzisi bakhetha ukucubungula nokudla i-non-decarboxylated cannabis njengamanje ngesikhathi se-decarboxylation amancane ama-monoterpenes nama-sequiterpenes, ama-phenols, amathoni, ama-aldehydes, ama-ether, nama-esters angahle aguquke.
I-Marijuana iqukethe izimbali ezomile namaqabunga aqhoshayo kanye neziqu zesitshalo se-Cannabis (ikakhulukazi i-Cannabis sativa). Leli fomu elidliwe kakhulu futhi liqukethe cishe. 3% kuya ku-20% ye-THC. Okucacile, izinhlobo ezibhekwe kakhulu zensangu zifinyelela okuqukethwe kwe-THC okungaphezu kwama-30%. I-Marijuana ingumthombo wemithombo yazo zonke ezinye izinhlobo ze-THC-equkethe imikhiqizo ye-cannabis. Ukuze uguqule i-cannabinoid egcwele kakhulu, i-tetrahydrocannabinolic acid (THCA), ibe yi-THC engokwengqondo, inqubo ye-decarboxylation kumele iqaliswe. Ngakho-ke, isitshalo se-cannabis noma ama-extracts awo kufanele sishiswe ukudala inqubo ye-decarboxylation. Phakathi ne-decarboxylation, i-THCA engeyona ingqondo iguqulwa ku-THC yokusebenza kwengqondo.
IHashishi noma i-hash yifomu ye-resin egxile (isb. yenziwe njengekhekhe noma ibhola) engakhiwa kusuka kief ecindezelwe noma kusuka ku-resin ekhishwa ebusweni besitshalo futhi ihanjiswe ngamabhola. Iyenzeka ngemibala ehlukahlukene kusuka emnyama kuya enhlabathini ensundu kuye ngokuthi kuhlanzekile nomthombo. Kutshwa ngomlomo (isib. Njenge-tincture noma njengesithako ekudleni) noma ukubhema. Ukubhema, izinhlobo ezahlukene zokusetshenziswa ziyaziwa, isib. Ku-pipe, hookah, bong, bubbler, vaporizer, ngommese oshisayo, ukubhema emajoyini, okuxubene namafihleki kagciwane noma ugwayi, noma ukubhema njengebhokisi.
I-Cannabis Tincture ibhekisela ekukhipheni kwamagciwane okutholakala nophuzo oludakayo noma i-glycerin yemifino. Ama-cannabinoids akhishwa esitshalweni se-cannabis besebenzisa imimoya ephezulu (ikakhulukazi okusanhlamvu utshwala) noma i-glycerin yemifino njenge-solvent.
I-hush yamafutha i-matrix ene-resinous ye-cannabinoid eyenziwa yikhukhula lesisombululo, eyenziwe ibe yilapho inqwaba noma i-viscous mass. I-hush yamahhashi ingenye yemikhiqizo ye-cannabis enamandla kakhulu ngenxa yezinga eliphezulu layo le-psychoactive compound THC. Ukusetshenziswa kwamafutha ase-hash okwenziwe i-butane kanye ne-carbon dioxide engaphezu kwesikhashana kuye kwanda ukuthandwa. I-huash yamafutha ngokuvamile iqhutshwa i-ultrasonically ibe i-emulsion. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic emulsification yamafutha we-hashi!
I-infusions bhekani ezinhlobonhlobo ze-influon inferno ezihluke komunye nomunye ngezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zezinhlayiya ezingezona ezithintekayo ezingasetshenziselwa ukulungiswa kwe-cannabis infusions. Ukulungiselela ukumnika okunjalo, indaba ye-cannabis ixubene ne-solvent bese icindezelwa futhi ihlungiwe ukuhambisa amafutha avela esitshalweni ibe yi-solvent. Ibhotela le-cocoa, ibhotela lebisi, amafutha okupheka, i-glycerine, kanye nama-moisturizers esikhumba ngokuvamile asetshenziselwa izivolumu. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic isizinda se-cannabis!
Inyosi yezokwelapha libhekisela ekusetshenzisweni kwesitshalo se-Cannabis njengendlela yokwelashwa kwe-herbal noma ukusetshenziswa kwamakhemikhali ayo asebenzayo njenge-synthetic THC kanye namasnabinoids. Lokhu ukusetshenziswa ngokuvamile kudinga umuthi wezokwelapha. Ucwaningo lwesayensi luye lwabonisa ukuthi ukusetshenziswa kwe-cannabis noma okutholakala kwayo kunemithelela emihle ngokumelene nesifo sokukhishwa ngamakhemikhali kanye nokuhlanza, ubuhlungu be-neuropathic, ne-multiple sclerosis.